ny Mampiaraka toerana miaraka amin’ny sary
Fisaorana ny sary, ny mombamomba ny mpitsidika hahazo ny fahatsapana voalohany ny momba anao. Eto no mahatonga anareo tokony mifantoka loatra ny safidy mety amin’ny sary.
Dia manolotra anao ny soso-kevitra izay hanampy anao hifidy ny tsara indrindra sary.
Mifidy ny sary fotsiny ianao.
Manana lehibe sary ny toerana misy anao hijery ny tena tsara, ary izany dia aseho voahodidina olona hafa. Te-haneho izay zava-dehibe aminao sy hanampy sary iray ao amin’ny fianakaviana. Tsy fahazoan-dalana hidirana ny fampiasana ny vondrona sary ho an’ny lehibe ny mombamomba sary. Rehefa dinihina tokoa, raha nitady olon-tiana iray isika dia miresaka afa-tsy ny momba anao, fa tsy ny namana na ny fianakaviana. Raha ny endriny dia hita ny olona hafa, dia hanelingelina ny tenany.
Angamba ianao dia manana ny sary izay efa vita tombo-kase tao miavaka ny toe-draharaha. Ianao lomano ao Karaiba, mitaingina soavaly na manao ny voalohany voatendry tampoka hitsambikina. Na dia ity sary ity no tena tsara tarehy, ianao dia mbola mila manao ny safidy manohana ny mombamomba ny mpanoratra. Sary fialam-boly fotsiny aza hadinoina ny manampy fotsiny aza manao ny tena. Noho ny tena sary, dia nisy mpivahiny iray nitsidika ny mombamomba mahazo ny fahatsapana voalohany ny momba anao. Izy te-hahita ny tavanao, ny masonareo, endrika. Ireo izay liana amin’ny tena sary, ianao ho afaka hianatra ny momba anao sy ny zavatra mahaliana kokoa, mitady anao sary rakikira.
Azonao atao koa ny mombamomba azy foana hatramin’ny sary izay afaka hisaintsaina ny feno ny tombontsoa.
Tianao mba handrisihana ny hafa hanao asa. Mifidy ny sary izay mijery mivantana any amin’ny fakan-tsary. Tsiky. Noho izany dia malemy sy tsara tarehy kokoa noho ny mahitsy ny tavako. Tsy sary miaraka amin’ny fitaovana toy ny solomaso, satroka, sns, dia miteraka ny fahatsapana fa ianao dia te-hanafina ny tavany.
Mifidy ny sary izay afaka mora amintsika ny hahita hoe aiza ianao no mijery ny fakan-tsary eo amin’ny fomba milamina, mitsiky. Ity sary ity dia miteraka ny fahatsapana ny fisokafana sy mahatonga ny tsara fahatsapana.
Tsy mamorona ny fahatsapana diso ny sary
Na dia teo aza ny fakam-panahy embellish ny tenantsika kely sy misafidy sary iray ny anao folo taona tanora, mihoatra ny hozatra na slim, tsy manaiky izany ny fakam-panahy.
Satria ho anareo no zava-dehibe fa ny mpampiasa amin’ny izay nanomboka ny fifandraisana, eo amin’ny tena fiainana dia mety ho toy ny manintona tahaka ny mombamomba. Raha ny sary tsy mifanaraka amin’ny tena izy ny sary, ny fihaonana voalohany dia hitarika ny fahadisoam-panantenana, ary tsy misy vola ny hatsarany sy ny charme dia tsy afa.
Raha toa ianao tsy afaka ny hahita ny tsara sary, ny manao izany
Tsy maintsy mifanaraka amin’ny sary, izay ihany ianao, ary mijery ny fakan-tsary, mitsiky. Na fara faharatsiny, na izay tiany. Avy eo izany resaka fotsiny ny fotoana. Hanome ny tenanao fotoana, mendrika anao izany.
Anontanio ny namana na ny olona ao amin’ny fianakaviana mba haka sary ianao ao ny sasany tsy tena maro loko fototra. Tsara kokoa raha toa ka ny fototra dia mamirapiratra, fa tsy mba maka sary manohitra ny fahazavana, manohitra ny fototra varavarankely na ny vavahady any amin’ny mampirehitra efitra fa ny olona tsy hijery loatra fotsy.
Na antsoy ny mpaka sary matihanina
Ny ezaka atao dia azo lazaina ho tsara tarehy sary dia hampitombo ny fahafahana mivory ireo izay tsy mba manantena.
Inona sary hampanalavitra ny mpampiasa ny aterineto Mampiaraka.
Psikology Mampiaraka an-tserasera dia nanapa-kevitra mba hahitana izay tahirin-kevitra no tena zava-dehibe, rehefa Mampiaraka an-tserasera sy izay mety hahakivy mety ho kandidà avy ny manomboka ny fifandraisana. Noho izany antony izany ny fanadihadiana dia natao teo anivon’ireo mpampiasa ny loharano
Skype tokan-tena. Maimaim-poana ny mampiaraka toerana →